सिके राउतलाइ जबाफ ‘म यो देशको अन्तिम सहिद बन्न चाहन्छु’ « Postpati – News For All
सिके राउतलाइ जबाफ ‘म यो देशको अन्तिम सहिद बन्न चाहन्छु’
पृथीछक बुढा मगर । यो देश कसैले बिर्तामा पाएको होइन । यो हिजो पनि हिमाल जस्तै अटल थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ । यो देश नेपालीको साझा घर हो । म नेपाली हुँ । नेपाल मेरो घर हो । मेरो घरको सिमानाको रक्षा गर्नु मेरो पहिलो दायित्व हो ।
यो देश कसैको बाबुको सम्पती पनि होइन । जसलाई भाईभाईमा चिराचिरा पारेर बाडियोस् । यो त साझा घर हो । साझा सम्पती हो । हिजो पनि यो साझै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुने नै छ । तर बिश्वमा कहिँ नभएको हिमाल, पहाड र तराईको यो सुन्दर भुगोललाई चिरा पार्न खोजिएको छ ।
यो माटो मेरो आमा हुन् । हामी सबैको आमा हुन् । के कसैले भएको एउटै आमालाई आफ्नै अगाडी चिराचिरा पारेको टुलुटुलु हेर्न सकिन्छ ? आमाको रक्षाको लागी के यो देशमा कुनै बहादुर छोराछोरीको जन्म भएको छैन ? कुनै राष्ट्रघातीलाई उडाउनको लागि यो देशमा एउटा पनि गोली बचेको छैन ?
सत्र हजार जनतालाई कत्लेलाम वनाउनेहरु एउटा देशद्रोहीलाई इन्काउटर गर्न किन सक्दैनन् ? के उनिहरु डराएकै हुन् ? यो देशको सरकारले त केही गर्न सकेन । तर शक्तिशाली बादशाहलाई घोडावाट पछार्न सक्ने शक्तिशाली जनता कहाँ छ ।
के देश बचाउने वेला आएन ? अब मातृभुमीको रक्षाका लागि जुरमुराउने वेला आएन ? यदि कोहि उठेन, जुरमुराएन भने पनि म मुठ्ठी कस्छु र मेरो आमाको सार्वभौम सत्ताको लागि म एक्लै यो देशको अन्तिम सहिद बन्न तयार छु ।
मेरो हातमा बन्दुक छैन । तर त्यो आबस्यकताको माग हो बनाउन सकिन्छ । म संग बारुद पनि छैन तर पिस्न सकिन्छ । गोली पनि छैन तर आरन गर्न सकिन्छ र छिनोले काट्न सकिन्छ । यो सिमा रक्षाको लागि लडिने लडाई हुनेछ । आमालाई बेश्या भन्नेहरु बिरुद्धको नेपाली जनताको लडाई हुनेछ, चाहे म एक्लो किन नहुँ तर एक मुठ्ठि सास रहुन्जेलसम्म लडिरहनेछु । ढटिरहने छु ।